Dagaallo xooggan oo dib uga qarxay Caasimada Koofurta Sudan ee Juba | Baydhabo Online
Dagaallo xooggan oo dib uga qarxay Caasimada Koofurta Sudan ee Juba
Dagaal xooggan ayaa dib uga qarxay magaalada Juba ee Caasimada Koofurta Sudan, maalin kadib markii iska hor imaad uu dhex maray Ciidamo daacad u ahaa Madaxweyne Salva Kiir iyo kuxigeenkiisa Riek Machar.
Sida ay soo warisay Jariirada Sudane Tribune dagaalka ayaa ka socda gudaha xarunta Madaxtooyada Jubba, halkaasoo saacadihii u dambeeyay laga maqlayay rasaas culus.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu qarxay markii Madaxweyne kuxigeenka Reik Machar uu tagay xarunta Madaxtooyada, halkaasoo uu kulan kula lahaa Madaxweyne Salva Kiir.
Dagaalka ayaa ka dambeeyay markii Ciidamada gaarka ah ee Madaxweyne Salva Kiir ay isku dayeen inay xiraan Reik Machar.
Afhayeen u hadlay Reik Machar oo lagu magacaabo James Gatdet Dak ayaa sheegay in dagaalka uu ka socdo banaanka Madaxtooyada.
“Reik Machar waxaa u yeeray Madaxweyne Salva Kiir, si ay uga wada hadlaan dagaallo shalay dhacay, balse Ilaalada Salva Kiir ayaa rasaas nagu furay, markii aan sugeynay inuu kulanka bilowdo”ayuu yiri Afhayeen u hadlay Reik Machar.
Waxaa uu sheegay in Mr Machar uu bad qabo, isla markaana ay ammaankiisa sugayaan Ilaaladiisa, inkastoo aanu bixin tafaasiil intaas dheer.
Hubka culus ayaa laga maqlayay agagaaraha Madaxtooyada, waxaana xaalka u muuqdaa inuu dib u qarxay dagaalkii sokeeye ee Koofurta Sudan.
Bishii April ayay aheyd markii Reik Machar uu dib ugu laabtay Caasimada Juba, markii heshiis nabadeed ay gaareen isaga iyo Madaxweyne Salva Kiir, kadib 20 bilood oo dagaalo ka socdeen qeybo ka mid ah Koofurta Sudan.
Dagaalka labada dhinac ka dhex qarxay ayaa ku soo beegmaya, iyadoo maalinta berri ku beegan tahay sanad-guuradii 5aad, markii Koofurta Sudan ay qaadatay madax banaani, isla markaana ka go’day Sudan inteeda kale.